Ciidanka Dowladda oo Gaaray Duleedka Degmada Jamaame – Bandhiga
Ciidanka Dowladda oo Gaaray Duleedka Degmada Jamaame
Jamaame (Bandhiga) – Cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka ayaa gaaray duleedka magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Dhexe, halkaasi oo ay doonayaan inay kala wareegayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Ciidamadaan oo isugu jira Daraawiishta maamulka Jubbaland iyo kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Danab ayaa howlgalkaan balaaran waxay wadaan maalintii labaad xili uu soo bilowday shalay oo Khamiis ahayd.
Sareeye Guuto, Aadan Maxamuud Ibraahim [Aadan Goojaar], taliyaha ciidamada Daraawiishta Jubbaland ayaa wuxuu sheegay in howlgalkii shalay ay ku dileen Tobban kamid ah xoogaga Al-Shabaab.
Taliyaha ayaa shaaca ka qaaday in maalmaha soo socda ay qorshaynayaa inay dib uqabsadaan magaalada Jamaame oo in ka badan tobbankii sano ee lasoo dhaafay ay gacanta ku hayso kooxda dagaalka kula jirta dowlada.
Dhinaca kale, ma jiro war rasmi ah oo ay Al-Shabaab uga jawaabayso hadalka kasoo yeeray taliska ciidamada Jubbaland, oo ku aadan dhaqdhaqaaqyadda ay wadaan iyo dilka xubnaha Shabaabka ahaa.
Deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka dalka waxaa ka soconaya Guluf balaaran oo ka dhan ah Al-Shabaab, kaasi oo ujeedkiisu yahay in kahor inta aysan AMISOM ka bixin dalka sanadka 2022-da guud ahaan maamulka dalka lagu soo celiyo gacanta dowlada.